Pedro Regis - krizy lehibe amin'ny finoana - Countdown amin'ilay Fanjakana
Ilay Fiadidian'ny Fandriampahalemana ho an'ny	Pedro Regis	on September 17, 2020:
Anaka, ny fahavaloko dia hihetsika hitarika anao hiala amin'ny fahamarinana, ary hahita ny heriny amin'ny tsy fivadihan'ny mpiandry ratsy fanahy maro izy. Mijaly aho noho izay mahazo anao. Miondrika am-bavaka. Omeo ahy ny tananao dia hitarika anao ho any Jesosy Zanako aho. Niely hatraiza hatraiza ny setroky ny Devoly, niteraka fahajambana ara-panahy amin'ny ankamaroan'ny zanako mahantra. Aza mivadika amin'i Jesosy sy amin'ny fampianaran'ny Magisterium marina ao amin'ny Fiangonany. Mandroso amin'ny fiarovana ny fahamarinana. Ity no hafatra omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina Indrindra. Misaotra anao noho ny namelanao ahy hanangona anao eto indray. Mitsodrano anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
Amin'ny 15 septambra 2020:
Anaka malala, izaho no reninao malahelo ary mijaly aho noho ny fijalianao. Aza ilaozana Jesosy Zanako. Aza avela hanandevo anao ny devoly. Malalaka ianao manompo ny Tompo. Mankany amin'ny ho avy fanamavoana lehibe ny Masina ianao. Hisy krizy lehibe amin'ny finoana ary maro no handeha tahaka ny jamba mitarika ny jamba. Mibebaha ary miverena Aminy izay tena Mpamonjy Tokana anao. Omeo ahy ny tananao dia hitarika anao amin'ny làlan'ny soa sy fahamasinana aho. Karakarao ny fiainanao ara-panahy. Mitadiava tanjaka amin'ny Evanjely sy ny Eokaristia. Raiso koa ny Appeals-ko ary ho lehibe amin'ny finoana ianao. Mandroso amin'ny fiarovana ny fahamarinana. Ity no hafatra omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina Indrindra. Misaotra anao noho ny namelanao ahy hanangona anao eto indray. Mitsodrano anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
Posted in Messages, Pedro Regis, Ny fanaintainan'ny asa.
← Gisella Cardia - Ny fiangonana…
Fanahy Kalifornia - Ny zava-drehetra… →